Qiimaha saamiyada aduunka oo dhan. Dashboardka shakhsi ahaaneed ee qiimaha, qiimaha saamiyada, jaantusyada qiimaha saamiyada iyo saamiyeynta shirkadaha ka yimaada aduunka oo idil.
5 daqiiqo kasta 15 daqiiqo kasta Saacad kasta
Muuji: qiimaha maanta Shaxda qiimaha furka suuqa soodhaweynta suuqa mugga ganacsiga mugga sawirka ganacsiga
AAPL = 142.71
isbeddelka sicirka sicirka taniyo
2 309 708 840 960
-316 245 803 008 (-12.04%)
isbedelka caasimadda ilaa tan
Ku dheji widgetkan ku yaal boggaaga ama blog.
GOOG = 2 233.33
1 467 791 441 920
-161 664 729 088 (-9.92%)
MSFT = 260.65
Microsoft Corporation daboolka suuqa
1 922 708 930 560
-144 515 399 680 (-6.99%)
AMZN = 2 142.77
Amazon.com, Inc. taariikhda qiimaha saamiyada
Amazon.com, Inc. daboolka suuqa
1 090 069 987 328
-384 406 126 592 (-26.07%)
FB = 196.23
Facebook, Inc. taariikhda qiimaha saamiyada
Facebook, Inc. daboolka suuqa
531 061 145 600
+23 471 161 344 (+4.62%)
Qodobbada saamiyada ee waqtiga dhabta ah, qiimaha saamiyadu wuxuu ku jiraa interneetka dhammaan isweydaarsiyada ganacsiga adduunka. Kharashka shirkadda ayaa maanta wadaagaya.
Xogta taariikhiga ah ee qiimaha saamiyada shirkadaha ka yimaada adduunka.
Dhamaan shirkadaha leh awoodooda iyo macaamil ganacsi ee suuqa saamiyada maanta.
Dhammaan shirkadaha leh wax-soo-saarka dulsaaraadka iyo lacag bixinta.
Waxtarka faa'iidada saamiyada iyo isbeddelada boqolkiiba ee dakhliga ku soo gala saamigooda marka la barbardhigo sannadkii tagay ee dhammaan shirkadaha caalamka oo idil.
Warbixinnada maaliyadeed ee ku saabsan faa'iidada iyo khasaaraha shirkadaha adduunka oo dhan.
Abuuri sanduuqyada maalgashiga adiga oo ku xiran shuruudaha aad u aragto muhiim.
Allstockstoday.com waa tixraaca suuqyada saamiyada ee internetka laga isticmaalo ee adduunka oo dhan.
Waxaan ku tusinaa waqtiga saxda ah tilmaamayaasha shirkadaha adduunka adduunka:
Qiimaha saamiyada shirkadaha adduunka oo dhan internetka
Qiimaha saamiyada ee shirkadda ee waqtiga-dhabta ah
Shaxda sicirka saamiyada ee shirkada suuqa saamiyada
Awooda shirkadaha maanta
Wuxuu ku qeybsadaa saamiyada shirkadaha muddada warbixinta ugu dambeysa
Taariikhda saamiyada shirkadaha
Natiijooyinka shirkadaha waqtiyada suuqa saamiyada
Qiimaynta shirkadaha ugu macaashka badan uguna macaashka badan
Meesha la maalgashado, xisaabiyaha dakhliga ugu sarreeya ee internetka
Adeeg walba wuxuu ku shaqeeyaa lacag la’aan iyo waqtiga dhabta ah.
Xogta oo dhan waxaa laga soo qaatay ilo furan waxaana ku soo aruuriyay barnaamijyadeena adeegyo ku habboon khadka tooska ah.
Xigashooyinka saamiyada internetka ee shirkadaha adduunka ku baahsan waa adeegga ugu weyn ee goobta. Waxay soo bandhigaysaa qiimaha shirkad kasta saamigeeda maanta. Waad arki kartaa qiimaha saamiga shirkad kasta. Si aad u aado adeegga xigashooyinka saamiyada, halkaan guji:
Qiimaha saamiga waqtiga-dhabta ah
Qiimaha saamiyada shirkada waqtiga dhabta ah ama qiimaha saamiyada shirkadda ama qiimaha saamiyada shirkadaha waxaa laga soo uruuriyay ganacsiga dhabta ah ee isweydaarsiga adduunka waxaana lagu soo bandhigay websaydhkeena.
Qiimaha saamiyada ee shirkaduhu way isbadalaan maalin walba, mar walbana waad arki kartaa qiimaha saamiyada ee shirkada maanta shabakada allstockstoday.com
Shaxda sicirka suuqa ee shirkadda
Shaxda sicirka suuqa saamiga ee shirkad - muuqaal jaantus ah oo ku saabsan qiimaha saamiga shirkada maanta iyo taariikhda qiimaha saamiyada qadka khadadka saamiyada qadka ee shirkad kasta oo adduunka ah waxaad ku arki kartaa adeegga:
Awooda shirkadaha maanta - wadarta qiimaha saamiyada shirkada maanta.
Awoodda guud ee shirkad kasta maalin walba way is beddeshaa, sidoo kale qiimaha saamiyada ay wadaagaan. Awoodda shirkadeed ee shirkadaha waxaa sidoo kale saameyn ku leh tirada saamiyada shirkaddan, oo sidoo kale laga yaabo inuu isbedelo wakhti kasta.
Adeeggeenna khadka tooska ahi wuxuu muujinayaa xarfaha guud ee shirkad kasta oo adduunka ah. Si aad u isticmaasho, dhagsii xiriirinta:
Saamiyada saamiyada shirkadaha muddada warbixinta ugu dambeysa waa mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee saamaynaya faa iidada saamiga, xaddiga macaashka laga helo maalgashadayaasha maalgashadayaasha saamigan.
Saamiyada saami qaybsiga ayaa ah macluumaad guud oo la heli karo xilli kasta oo warbixin ah ayaa loo sameeyay shirkad kasta.
Waad arki kartaa cabirka saamiga saamiyada shirkad walba muddadii ugu dambeysay ee warbixinta, iyo muddooyinka kale ee warbixinta qeybteena, oo lagu magacaabo:
Taariikhda xigashooyinka saamiyada
Taariikhda saamiyada saamiyada shirkadaha waqtiyo kala duwan ayaa laga heli karaa khadka tooska ah ee adeegyadayada. Markaa si bilaash ah ayaad u arki kartaa:
taariikhda qiimaha isugeynta saamiyada ee shirkadaha maalinlaha ah
taariikhda qiimaha saamiga toddobaadlaha
taariikhda qiimaha saamiyada billaha ee shirkadaha
taariikhda qormooyinka saamiyada shirkadda ee sanadka
Si aad u eegto taariikhda qiimaha saamiyada shirkad kasta, adeegso xiriirinta:
Faa'iidooyinka shirkadaha maanta - qiimaha si rasmi ah loogu caddeeyey faa'iidada bayaannada maaliyadeed ee ugu dambeeyay ee shirkadda. Boggeena websaydhka kuma arki kartid kaliya faa iidada ay shirkaddu maanta leedahay, laakiin sidoo kale waxaad ku arki kartaa faa iidada shirkadda muddooyinka kale ee warbixinta.
Faa'iidada shirkadda waa dabeecad saameyn weyn ku yeelata koorsada iyo qiimaha saamiyada berri.
Adeegga "shirkadda faa'iidada" waxaa laga heli karaa:
Dakhliga shirkadaha waqtiyada suuqa saamiyada
Dakhliga suuqa saamiyada wakhti kasta waa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qiimaha saamiyada. Qiimaha saamiga ama qiimaheeda ilaa heer aad u sareeya ayaa go'aamiya daqliga shirkada xilliyo kala duwan oo warbixin ah.
Dakhliga ka soo qodista maanta fahamka dakhliga shirkadda ee muddadii warbixinti ugu dambeysay.
Halkan waxaad ku arki kartaa dakhliga shirkadaha sida maanta oo kale, iyo sidoo kale taariikhda dakhliga shirkadda marka loo eego warbixinadii hore.
Adeegga "Dakhliga Shirkadda" halkan ayuu ku yaal:
Darajaynta shirkadaha ugu macaashka badan uguna macaashka badan ayaa si otomaatig ah loogu ururiyaa sicirka saamiyada adduunka laga keenay.
Qiimaynta saamiyada qadka ah waa mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan maalgashadayaasha adduunka. Qiimaynta shirkadaha faa iidada leh ayaa maalin walba is beddelaya. Maaha wax qarsoon in maalgashiyada ugu faa iidada badan lagu sameeyo si sax ah shirkadaha shirkadaha ugu faa’iidada badan.
Waxaad fursad u leedahay inaad si bilaash ah ugu aragto qiimeynta shirkadaha ugu faa'iidada badan adduunka adeeggayaga:
Halkee si ay lacag ugu maal gasho, xisaabiyaha tooska ah ee dakhliga ugu sarreeya waa adeeg madax-bannaan oo lagu habayn karo boggayaga Waad dooran kartaa astaamaha kala duwan ee shirkadaha si aad u fahanto halka ay ku maalgelinayso:
is beddelka sicirka saamiyada shirkadda
saami qaybsiga: celceliska iyo xaddiga lacageed
Tilmaamayaal maaliyadeed sida faa iidada, faa iidada, tirada hantida
Adiga ayaa go'aaminaya halka aad ku maalgelinaysid lacagta, laakiin adeeggayagu wuxuu kaa caawin doonaa inaad doorato tiro yar oo ka mid ah shirkadaha ugu macaashka badan maalgashiga tobannaan kun oo kale.